कोरोना कहरमा बाढी अनि पहिरोको डर – Mission Khabar
कोरोना कहरमा बाढी अनि पहिरोको डर
मिसन खबर ६ असार २०७८, आईतवार १२:१७
कोरोना महामारिको विपद्ध नटर्दै फेरी हामी अर्को विपद्ध सहन बाध्य बनेका छौँ । बारम्बार बाढी, पहिरो र डुबानको पीडा सहनुपरिरहेको सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै होइन, देशैभर आज के होला, भोली के होला ? भन्दै त्रासमा बाच्नुपर्ने अवस्थामा छन्, नागरिकहरु । मनसुनी वर्षा सक्रिय भएसँगै नदी, खोलामा बहाब बढेर धेरै जिल्लाको तटिय क्षेत्रको बस्ती डुबानमा परेको छ । पहाडी जिल्लाहरुमा पहिरोको प्रकोप बढिरहेको छ । पछिल्लो एक सातामा मात्रै पनि पहिरो, बाढी र डुबानमा परेर १७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । २२ जना अझै बेपत्ता छन् ।
मानविय क्षतीसँगै अर्बौ अर्बको भौतिक क्षती मनसुन सुरु भएको केही दिनमै देश र जनताले भोग्नु परेको छ । विगत लामो समयदेखी जोखिम आँकलन गरिएका हिमाली र पहाडी क्षेत्रका बस्ती अहिलेसम्म सार्न नसक्दा पहिरोले यो बर्ष कति मानविय र भौतिक क्षती हुने हो भन्ने चिन्ता हरेक नेपाली जनमा बढाएको छ । १२ बर्षदेखी उस्तै बिपद्धको सामना गरिरहेको सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे क्षेत्रको अवस्था हेर्दा लाग्छ, सरकार नागरिकको जीउ धनको रक्षामा कत्तिपनि गम्भिर छैन । गत वर्षमात्रै विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको सिन्धुपाल्चोकलाई सरकारले त सुरक्षित बनाउन चाहेन नै, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ने तपाई हाम्रो साबधानीमा पनि हेलचेक्राई धेरै देखियो । वर्षाद भर्खर मात्रै सुरु भएको छ । मनसुन सक्रिय भएको केही दिनबाटै हामीले ठूलो मानविय र भौतिक क्षती ब्यहोर्नुपरेको छ । तपाई हामीले नचाहादा नचाहादै यो क्रमले थप निरन्तरता पाउने निश्चित छ ।
बाढी पहिरोपछि उद्धार र राहतमा दौडिने नेता तथा उच्च पदस्थहरुले पनि जोखिम निराकरका लागि बेलैमा सोचिदिने कि ? प्रश्न उठिरहेको छ । सरकारले के गर्नुपर्थ्यो, के गरिरहेको छ । के गर्दैछ यो सोच्दा अब ढिला भैसक्नेछ । यसैले अब यो विपद्ध धेरै झेल्नुपर्ने समयमा तपाई हामी आफै जोगिनुपर्छ, अटेरीबाट सच्चिनुपर्छ । दशा बाजा बजाएर आउँदैन भनेजस्तै कहाँ कतिबेला कुन प्रकोप आइलाग्छ थाहै हुन्न । यसैले जमिनको अवस्था, पहिरोको जोखिमको पूर्वआँकलन गरेर पहाडी क्षेत्रमा बस्नेहरु अस्थायी रुपमै भएपनि सुरक्षित स्थानमा सरौँ । खोला नदी आसपासमा बसोबास गर्नेहरु केही महिनालाई भएपनि सुरक्षित ठाउँमा बसौँ । प्राकृतिक विपद्धको जोखिम तपाई हामीले पुरै छेक्न नसकेपनि सचेतना र सुरक्षित स्थानको बासले धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । मौसमविद्हरुले अझै केही दिन देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा हुने पूर्वानुमानसहितको जानकारी गराएका छन् । विज्ञहरुले नै डढेलो, भुकम्पिय हलचल, भौगोलिक अवस्था लगायतको अध्ययनका आधारमा विगत भन्दा बाढी, डुबान र पहिरोको जोखिम बढी हुँने आँकलन गरेका छन् ।
हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिका कारण यो मौसम नै जोखिमको मौसम हो । मनसुन सक्रिय भैसकेकाले अब भौतिक क्षतीलाई रोक्न केही गाह्रो भएपनि यो बर्षलाई जीवन बचाऔँ, बाचिएछ भने अर्को बर्षदेखी राज्यको मुख ताकेर बस्नेमात्रै नभई आफ्नो बासलाई सुरक्षित बनाउने गराउनेतिर हरेक नागरिकले बेलैमा काम गर्नुपपर्छ । यति सावधानीले मात्रै पनि तपाई हामीले यति भौतिक क्षती उति मानविय क्षती भनेर खिन्न हुँदै पीडासहितको समाचार सुन्न र सुनाउनु पर्दैन ।
क्याटेगोरी : जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, सम्पादकीय / ब्लग